၁၁:၂၈၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၈‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းများ: update ranking table
၁၀:၄၂၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF အကောင်းဆုံးလက်ရွေးစင်အသင်းဆု: change YYYY to burmese
၁၀:၄၀၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ချုပ်ဆု: change years to burmese
၁၀:၃၈၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အာဆီယံချစ်ကြည်ရေးဆု: change YYYY to burmese
၁၀:၃၅၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၇‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ASEAN Goodwill Award: translate title to Burmese
၁၀:၂၁၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၈‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF Futsal Team of the Year: translate into Burmese (redirect to thai football instead of thai fusal becasue the link shows error)
၁၀:၀၂၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၅‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ Fusal team of the year section added
၀၀:၄၇၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းများ: update vertical bar graph
၀၀:၄၆၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းများ: update vertical bar graph
၀၀:၃၅၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF အကောင်ဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆု: spelling correction
၀၀:၃၄၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF အကောင်ဆုံးကစားသမားဆု (အမျိုးသား): correct
၀၀:၃၃၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎AFF အကောင်ဆုံးကစားသမားဆု (အမျိုးသမီး): correct spelling error
၀၀:၂၁၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၂၅‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ Added AFF Youth Player of the year section
၀၀:၀၅၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၃‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ASEAN Goodwill Award: name change to Burmese language
၀၀:၀၃၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၈၉‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ Added AFF Player of the year (Women) section
၂၃:၃၉၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၆‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ change logo and headquarter location captions in infobox to Burmese langauge
၂၃:၂၉၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၀‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ change Chairman's name in Burmese in the info box section
၂၃:၂၇၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၀‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ဥက္ကဋ္ဌများ: change names in Burmese
၂၃:၀၆၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၀‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ဥက္ကဋ္ဌများ: change years to Burmese
၁၉:၅၁၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃၂၆‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ Added AFF အကောင်းဆုံးလက်ရွေးစင်အသင်းဆု and AFF အကောင်ဆုံးကစားသမားဆု (အမျိုးသား) sections
၁၉:၁၀၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၈၇‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ added သမိုင်းကြောင်း section, move ဥက္ကဋ္ဌများ section to from section6to section 2. update AFF အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ချုပ်ဆု section - 2019 Indonesia
၂၂:၄၉၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၂‎ အသုံးပြုသူ:Nickylee83 ‎ →‎ကျွန်တော့်အကြောင်း: table of languages has been added
၂၂:၀၅၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၁၂‎ ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ added last line and language links to the second para လက်ရှိ
၁၀:၃၇၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၅၈‎ ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ some Links for countries and languages added in the paragraphs
၁၀:၀၆၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎
၁၀:၀၅၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၁၂‎ အရေးမကြီး ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ Minor Correction on second paragraph
၁၀:၀၁၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂၃၆‎ ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ A few lines are added in the second paragraph.
၁၀:၅၀၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၂‎ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ‎ National song audio file added to Info box
၁၀:၄၆၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၇‎ ဂျာမနီနိုင်ငံ ‎ Original German name added for Motto and National anthem in Info Box session
၀၀:၄၃၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆၀‎ ဂျာမနီနိုင်ငံ ‎ National Motto and national song added to Info Box session
၀၀:၀၄၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၁၀‎ အသစ် ဆွေးနွေးချက်:ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ "Admin ခင်ဗျား အခြာ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
၂၃:၂၃၊ ၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၉၆‎ ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ updated all available links in first para, first line is added for the second para.
၀၂:၀၆၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၀‎ မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း ‎ Updated broken link in Info box - AFF အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်
၀၁:၄၁၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၅၁၁‎ အသစ် အသုံးပြုသူ:Nickylee83 ‎ "Hello Wikipedia and below is justabrief..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
၀၀:၄၀၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၀၁၉‎ ဂျာမန်ဘာသာစကား ‎ Translated the first paragraph from En: Wikipedia page
၂၁:၂၈၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၇၉‎ အသစ် ဆွေးနွေးချက်:အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ "ကျွန်တော် ဒီစာ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
၂၁:၀၇၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၇‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎Elo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: Change table caption to Burmese language
၂၁:၀၅၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂၃‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎Elo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: table's wiki note has been changed to Burmese language
၂၀:၅၇၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၄၄‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ new citation added for Infobox organization section - AFF president
၂၀:၁၀၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၇၀‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ပေးအပ်သောဆုများ: AFF goodwill award and AFF Association Award tables has been added.
၁၄:၁၈၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၈‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းများ: change table caption to Burmese language
၁၄:၁၆၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၆‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းများ: change table caption to Burmese language.
၁၄:၁၀၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းများ
၁၄:၀၉၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းများ: Change table title to Burmese language
၁၃:၄၉၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၆‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: Missing tags added to format the graph and table nicely
၂၃:၁၇၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၈၂‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎ကလပ်: Addedafew words in the paragraph.
၂၃:၀၂၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၇‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎Elo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: Table data updated to 24 June 2019 as well as broken table footer link. "*" short note has been added.
၂၂:၅၇၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၉၅‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အဖွဲ့ဝင်များ: Short description for Member Associations has been added.
၂၂:၄၁၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈‎ အရေးမကြီး အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အဖွဲ့ဝင်များ: just change title "Code" to "ကုဒ်"
၂၂:၃၂၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃၄‎ အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ‎ →‎အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းများ: Change (*) note one into Burmese language